Projects | Myanmar Fulbright Alumni Association
MFAA သည် လူငယ်များ၏ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်သံရုံး၏ FY 2017 Mission Driven Alumni Outreach Program Proposal ကို လျှောက်ထားရယူပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။၄င်းစီမံကိန်း၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ တွင် Fulbrighter's Diaries ဖူးလ်ဘရိုက်ခရီးဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေကာ ပညာရေးသက်ဆိုင်သည့် နယ်ပယ်အသီးသီးသို့အခမဲ့ ဖြန့် ဝေ ခဲ့ပါသည်။ ရှေ့ဆက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ပညာရေး နှင့် စွမ်းအင်မြှင့်တင်ရေး ကဏ္ဍတွင် တထောင့်တနေရာမှ တတ်အားသ၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Fulbright Professional Talks and Youth Empowerment Final Report 2018 March
The first installment of the funds has been spent on publication of Fulbright Diaries books. The second installment had been spent for three professional talks at KyaukSe Technological University, Taunggyi ....
Performance Narrative Report (Performance Progressive Report)
Myanmar Fulbright Alumni Association (MFAA) organizing has started since the end of 2012. MFAA developed the Article of Association (AOA) (See Appendix D1 and D3). However, facing the practical challenges ....